Tonizia: Miala any ny Ady ho an’ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Miala any ny Ady ho an'ny Demaokrasia
Voadika ny 14 Febroary 2011 6:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Iray volana eo izao no nandosiran'ilay filoha Toniziana teo aloha, Zine El Abidine Ben Ali, ka nandeha nialokaloka any Arabia Saodita, tao anatin'ireo fitakiana maro nifanesy nanerana ity firenena ao Avaratr'i Afrika ity izay nitakiana ny fialàny. Ho an-dry zareo Toniziana, na izany aza, tsy mbola vita akory ny ady, ary ny fanendahana ilay mpanao jadona tsy midika velively fa tapitra hatreo ny jadona. Ny marina, matetika ny Toniziana no mamaritra ny fitondrana jadon”i Ben Ali nandritra ny 23 taona ho toy ny orita voatapa-doha, fa tsy ny tanany.
Hatramin'ny nidarabohan'ny fitondran'i Ben Ali, mihetsika manao izay handravàna ny antokon'ny mpitondra taloha hàlam-bahoaka ireo mpanao fihetsiketsehana, ny RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), izay mifamatotra amin'ny resaka kolikoly, famoretana, fanaovana jadona ary, raisina ho toy ny loza mitatao ho an'ny fizoran'ny tetezamita ho any amin'ny demaokrasia. Ampangaina ho mamafy faharavana sy fanakorontanana ny firenena ihany koa ny RCD taorian'ny fiafaràn'ny fitondran'i Ben Ali. Avy eo, tsy mahagaga raha feno fankahalàna RCD ny vahoaka Toniziana sady mitady izay hanapahana ny fifamatorana amin'ny lasa.
Abdallah Belakhoua (@Abdallah__B) miantso ny Toniziana mba hijanona anaty firaisankina ka hifantoka amin'ny tanjona tokana goavana, dia ny fandravàna ny RCD:
Ireo antitra katsikana ao amin'ny RCD dia maniry ny hahita antsika misamatsamaka sy samy maka ho azy, ary avy eo hanadino ny fisian'izy ireo. Mila MITAMBATRA sy MATANJAKA isika.
Miantso ny Toniziana rehetra aho: tandremo voasarika hihataka sy hamakivaky ny zavatra ilaina, Irian-dry zareo ny hanadinoantsika ny tena tanjona fototra: Handevina ny RCD.
Abdrabba Yassine, Toniziana iray injeniera informatika, dia mametraka fanontaniana mavesa-danja iray: Hatraiza ny fahavononan'ireo mpikambana ao amin'ny RCD hamotsotra ny tombontsoan-dry zareo ho an'ny tombontsoan'ny rivo-panovàna ao Tonizia?
Ho mora amin'ireo misitraka fahefana tsy manam-petra sy karama be ve ny hamoy fotsiny eo ireny tombontsoa ireny?
Na dia niala tamin'ny RCD aza ny praminisitra ankehitriny, Mohammed Ghannouchi ary tsy voaloton'ny resaka kolikoly ny tantara ara-politikany, dia voakiana sy voapanga ihany izy ho niray tsikombakomba tamin'ny antoko faran'izay hàlan'ny olona tao Tonizia.
Amin'ny fampiasàna teny henjana, Alyssa, Toniziana iray mpitoraka bilaogy, dia tsy manafina mihitsy ny tsy firaharahàny ny PM Mohammed Ghannouchi:
Atoa. Mohammed Ghannouchi, tsy tiako ianao, Tsy nankasitraka anao mihitsy aho hatrizay ary matahotra aho fa tsy hiova velively izany. Tsy maniry ny hahafantatra anao akory aho mba ho hamantarana izay mety ho toetra tsara kely anananao, satria indrisy, manana tsy fahatomombanana goavana ianao: kanosa toy ny omby.
Khem (@TunisianCityzen) mandefa bitsika:
Fa mba iza moa i Ghannouchi no hihevitra hanome lesona momba ny demaokrasia ny vahoaka Toniziana, dia izy izay nanohana ny fitondrana jadona nandritra ny 13 taona.
Houssem HAJLAOUI, Toniziana iray mpitoraka bilaogy dia nanoratra lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe: ” Ireto ireo fahavalon'ny fiovàna, sy ny nofinofy hahita Tonizia afaka”.
Ho azy, ny RCD sy ny governemanta vonjimaikany dia isan'ireny fahavalo ireny.
Hoy izy miteny:
Marina fa naato daholo ny asan'ny antoko RCD ary efa resaka fotoana sisa ny fandravàna azy, saingy mbola eny rehetra eny ireo sela homamiadany. Ary raha mbola tsy mahafantatra tsara ny firosoan'ny kaomisiona mpanadihady mikasika ny kolikoly ny vahoaka Toniziana, dia tsy hahagaga ny RCD raha raisina ho toy ny loza mitatao ho an'ny revolisiona sy ny hoavin'ny tetikasa demaokratika eto Tonizia.
Ny governemanta vonjimaika:
Tsy haiko faritana ho toy ny fahavalon'ny revolisiona izy ity satria tsy misy fantatro izay tiany hatao. Na izany aza, ny governemanta vonjimaika dia mandany fotoana, tafiditra amin'ny politikan'ny fanilihana ary tsy mandeha ilàlany ny dingana sasantsasany noraisiny. Noho izany, tsy azo ihodivirana ny fanaraha-maso azy ity sy ny fanohizana ny fanaovana tsindry aminy.